Xumaantii Sacuudiga oo Gaartay in Geela Qadar Harraad u Le’do – Radio Daljir
Luulyo 10, 2017 7:44 g 0
Sida ay qortay jariirada Daily Mail ee dalka Ingiriiska, boqollaal geel ah oo Qadariyiintu leeyihiin ayaa harraad iyo gaajo u dhintay markii Sacuudigu ay baadkii iyo biyihii ka goosteen.
Geela Qadar ayaa badanaa la daajiyaa beero ay Sacuudigu leeyihiin oo ku yaal xuduudda labada dal, dhanka Sacuudiga. Laakiin isla markii uu xiriirku labada dal xumaaday ayaa dhammaan geelii Qadar ee daaqi jiray beeraha Sacuudiga xeryaha oodda looga qaaday, laguna sii daayey saxaraha Qadar.
Waxaa la qiyaasayaa in Sacuudigu uu oodda ka qaaday geel Qadar leedahay oo kor u dhaafay 15,000 halood iyo 10,000 ido ah. Geela 9,000 (sagaal kun) oo kamid waxaa oodda looga qaaday wax ka yar 36 saac xiriirjar kabacdi.
Geellaha magaciisu ku sheegay Xuseen Al-Maari ayaa yiri, “waxaan ka soo laabtay Sacuudiga mise tiro geela oo 100 kor u dhaafaysa oo geelaygii ahi waa dhinteen, boqolaal kale meel aan ku sheego ma aqaan, sidoo kale boqolaal ido ah gacan kuma jiraan.”
Maqaalo Kale 74 Wararka 3139